Luis Suarez Oo 2 Sanno Ciyaaraha Laga Mamnuucayo Qaniinyadii Chiellini Darteed
HomeWararka MaantaLuis Suarez Oo 2 Sanno Ciyaaraha Laga Mamnuucayo Qaniinyadii Chiellini Darteed
Luis Suárez ayaa maanta la saari doonaa ganaax kadib markii uu garabka ka qaniinay ciyaaryahankii ka soo horjeeday – falkaas oo haddii uu ku cadaado ganaaxiisu noqonayo laba sanno oo laga mamnuuco inaanu garoomada cag soo gallinin.
Weeraryahanka reer Uruguay ayaa ku eedeysan falkii uu garanka kaga qaniinay difaac yahanka xulka Talyaaniga ee Giorgio Chiellini, 14 bilood oo kaliya kadib raaligalintiisii dhacdadii lamidka ahayd ee uu ka sameeyey wadanka Biritain.
Gudiga anshaxa ee xidhiidhka Fifa ayaa maanta daboolka ka qaaday inay furtay kiiska ciyaaryahanka naadiga Liverpool ee Suarez, isla markaana ay ka dalbadeen xulkiisa inuu la yimaado cadaymaha ay isku difaacayaan inta ka horeya saacada 5:00 pm ee wakhtiga wadanka Brazil , bariga afrikana noqonaysa 12 ka habeenimo ee maanta.
“Fifa waxay cadaynaysaa in gudigeeda anshaxu furay kiiska dacwada ka dhanka ah ciyaaryahanka xulka Uruguay ee Luis Suarez oo ku eedaysan ku xad gudubka xeerarka anshaxa ee. 48 ama/iyo xeerka. 57 ee anshaxa Fifa u yaala , ciyaartii ka tirsanayd koobka aduunka 2014, xulkiisa Uruguay iy Italy dhex martay 24 kii June 2014.” ayaa lagu yidhi warmurtiyeed Fifa soo saartay saaka.
“Ciyaaryahanka ama/iyo xidhiidhka kubada cagta ee Uruguay waxaa lagu marti qaadayaa inay qaybtooda ka qaataan oo la yimaadaan wixii docomenta cadayn ah ee ay hayaan inta ka horeysa 25 June 2014, 5pm, ee wakhtiga Brasilia time.
Sanadkii hore ayaa laga ganaaxay 10 ciyaarood kadib markii uu qaniinay difaacyahanka naadiga Chelsea ee Branislav Ivanovic.
Haddii dambigani ku cadaadona, Suarez wuxuu mudan karaa inuu seego inta ka dhiman koobka aduunka, waxaana laga ganaaxi doonaa 24 ciyaarood ama laba sanno, taas oo saamayn doonta mustaqbalkiisa Naadiga iyo sidoo kale kan qarankiisa.
Yossi Benayoun Oo Doqon Ku Tilmaamay Barton Kadib Markii Laacibka QPR Cambaareeyay Gumaadka Yuhuuda Ee Gaza
Messi Oo Maxkamad La Taagay Iyo Dembiga Loo Haysto